Qhagamshela imigca neMicrostation Geographics -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Ukuxhuma imigca nge-Microstation Geographics
Nali iqhinga elaziwa kwabanye abasebenzisi beMicrostation, neliphume ekupheleni kweklasi kule veki.
Umsebenzi endiwushiyele kubafundi kukuzoba zonke ii-hydrology kwiphepha lemephu: imilambo, imilambo, iilwandle ...
Abanye bazoba "imigca elungileyo" engadibaniswanga ukuze ekugqibeleni babe nemigca emininzi evulelekileyo.
Ke sisebenzisa umyalelo "xhuma umgca wokusebenza", oza kwimenyu "izixhobo, i-geographics, indalo ye-topology" nangona kwiMaphu ye-XM iza kwi "topology cleanup"
Kule nto, ucingo lwenziwa phezu kwendawo yonke apho ufuna ukulungiswa khona, ngoko umyalelo usebenze kwaye ukhenketho lwenziwe ngaphakathi kwocingo.
kwaye kwenziwe, isiphumo kukuba sidibanisa zonke izinto ezinomgca phakathi kwama vertices kwaye uziguqule ekubeni zii-linestrings okanye i-polylines.
Emva kwexesha, ngeenjongo zokujoyina i-polylines ngesandla kukho umthetho othi "dala imixokelelwane enzima"
Ewe, ngokwendlela, oku kufuneka kwenziwe emva kokucocwa kwe-topological, okungenani ukwahlulahlulahlula.
Kwaye ke ukuqinisekisa ukuba akukho zinto zingaqhelekanga zishiywe, "ukumanziswa kwemvula" kusebenze, okupeyinta into nganye ngemibala eyahlukeneyo ukuyibona.
I-GIS Manifold; Ukwakha kunye nezixhobo zokuhlela
Ngokuqinisekileyo i-XM izisa. Ukucacisa ukuba njengokuba yayiyi-Microstation Geographics, yipropati ye-Bentley Map.
Uhlobo oluqhelekileyo lwe-Microstation XM alunalo.
Itholakala kwi-bar e-Topology Cleanup bar, njengoko kuboniswe kuyo
Sawubona! oko ndifuna ukwazi ukuba ungasebenzisa imigca yokudibanisa kwi xm eyenzekayo i-esque ineendawo ezisebenzayo kumatshini we-xp kodwa i-xm ekujonge kwelinye umatshini kwaye ndifuna ukwazi ukuxhuma imigca embalwa kwi-xm elinganayo yokuxhuma imigca kwi-greetings xm !!!!
Mariana G. uthi:
Ukuba unomdla wokwenza utshintshiselwano lwentengiso (iteknoloji, i-informatics, inxulumene) ndiqhagamshelane nayo link.exchange.mariana@gmail.com
Ndiya kuba nombulelo kakhulu kumntu onokundinceda ndiphumeze oku kulandelayo.
Ukulinganiswa kwendawo yeengongoma ezibophelelweyo kunye nemigca yokuphuka.
I-TIN yakhiwe nayo nayiphina isofthiwe ehambelana ne-Microstation
Iingqungquthela zamanqanaba ezinqabileyo ngaphandle kokuhlaziya.
Ubungakanani beprojekthi buba ngamaphuzu ambalwa amawaka, phakathi kwamanqaku anqamlekileyo kunye nemigca yemigca yokuphuka. Ngokubhekiselele kumhlaba, ngakumbi kunzima, ngcono.
Ekubeni i-Microstation yam i-2 version (musa ukuhleka, nceda), ndiya kuqonda ukuba idatha yaziswa kwiifayile ze-ASCII. Ifomathi ingaba nayiphi na, ngokungakhathaliseki ukuba iifayile zibhalwe ngokucacileyo kwaye zihamba kunye nenkcazo emfutshane.
Ndiye ndaqonda ukuba ndicela ububele obukhulu. Kodwa ndiyifunayo ukuze ndifunde ngokuthelekisayo okungeze ndizise nantoni na. Ndiza kuvuma igalelo ngokugqithiseleyo kwinqaku eligqibeleleyo eliza kuzisa iziphumo zeli nqaku.
Ndiyabonga kakhulu ngqalelo yakho
Indlela yokutshintsha ukubonakala kwemephu